CV Form ဆိုတာတကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ First Impression ပါ။အလုပ်လျှောက်ရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကို လေ့လာဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်ဖြစ်တဲ့ CV Form ကိုပြည့်စုံပြီး Professional ဆန်စွာ စနစ်တကျရေးသားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ CV Form ကိုကြည့်ရှုလေ့လာပြီးမှ သာကြိုက်မကြိုက်ဆုံးဖြတ်ပြီး Interview နောက်တစ်ဆင့်အတွက်စဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်လျှောက်ရာမှာ CV Form ဟာအလွန် အရေးကြီးပါတယ်။
ဈေးကွက်တွင်းအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့ CV Form တွေဟာတကယ်တမ်းတော့ အကြောင်းအရာတွေ ပြည့်စုံစွာမပါဝင်ပါဘူး။ အချက်အလက်တွေပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့ အတွက်ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေ စနစ်တကျ ဖြည့်ဖို့ ရေးဖို့လိုအပ်လဲဆိုတာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. ပထမဆုံးသတိထားရမှာက ဓာတ်ပုံပါ။ မသေမသပ်မဟုတ်ပဲ သေသေချာချာ စနစ်တကျရိုက်ကူးထား တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။
၂. ကိုယ့်ရဲ့ Personal Details ကိုယ်ရေးအချက်လက်ကိုမှန်ကန်ပြည့်စုံစွာဖြည့်ပေးရပါမယ်။ နာမည်၊ မှတ်ပုံတင်၊ အသက် စသဖြင့်အရင်ပြည့်စုံစွာဖြည့်ပေးရပါတယ်။
၃. ပညာအရည်အချင်းပါ။ ကိုယ်တတ်မြောက် ပြီးမြောက်ထားတဲ့ ဘွဲ့၊ဒီပလိုမာ၊သင်တန်းလက်မှတ် စသဖြင့်ပါ။ ကိုယ်ဘွဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ အထူးပြုဘာသာ၊အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ် မည်သည့်ခုနှစ်ကနေ ဘယ်အချိန်ထိတက်ရောက်ခဲ့သလဲ စသဖြင့်ဖော်ပြပေးပါ။
၄. အလုပ်အတွေ့အကြုံပါ။ အလုပ်အတွေ့အကြုံရှိသူတွေက ကိုယ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Company နာမည်၊ ရာထူး၊လုပ်သက်စတတာတွေကို တိတိကျကျဖော်ပြပေးပါ။ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကိုရေးသားရာမှာ ၆ လအောက်အတွေ့အကြုံ ဥပမာ ၁လ ၂လ စသဖြင့်ရေးသားခြင်းဟာ ကိုယ့်အပေါ်ယုံကြည်မှုလျော့ နည်းစေပါတယ်။ Internship အလုပ်သင် အနေနဲ့ လုပ်ခဲ့ဖူးရင်တော့ ထည့်သွင်းရေးသားလို့ရပါတယ်။
၅. ကိုယ့်ရဲ့ Skills ကျွမ်းကျင်မှုပါ။ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းတွေပါ။ ကိုယ်ဟာ Customer Service မှာကျွမ်း ကျင်သူလား စာရင်းဇယားမှာကျွမ်းကျင်တာလား ဒါမှမဟုတ် Graphic ကိုကျွမ်းကျင်သလား Typing ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရိုက်နိုင်သလားစသဖြင့်ပါ။
၆. ဘာသာစကားပါ။ ကိုယ်တတ်မြောက်ထားတဲ့ဘာသာစကား အဆင့် Level ကိုသေချာစွာဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ Certificate ရှိရုံနဲ့ တကယ်တတ်မြောက်တယ်မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ်တကယ် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးချနိုင်မဲ့ အဆင့် Level ကိုဖော်ပြပေးတာပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
၇. Career Objective ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အတွက် အသက်မွေးမှုရည်မှန်းချက်ပါ။ များသောအားဖြင့်ထည့်သွင်းမရေးသားကျပေမဲ့ ထည့်သွင်းရေးသားပေးသင့်တဲ့အချက်ပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ Skill နဲ့ Ability ကိုလည်းဖော်ပြရာရောက်ပီး ကိုယ်ရဲ့အလုပ်အပေါ် ဘယ်လောက်အဆင့် ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ကိုယ့်ရဲ့ Career Goal ကိုမျှော်မှန်း ထားသလဲဖော်ပြထားတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ Image ကိုတက်စေပါတယ်။
၈. ဆက်သွယ်ရမဲ့လိပ်စာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် Email၊ လိပ်စာ၊ အိမ်လိပ်စာ စတာတွေကို ပြန်လည်ဆက်သွယ်လို့ရရန်သေချာဖြည့်စွက်ပေးသင့်ပါတယ်။
၉. CV Form ဟာ Up To Date ဖြစ်နေရပါမယ်။ကိုယ်အလုပ်မလျှောက်ခင်မှာသေချာစီစစ်ရေးသားတာဟာအကောင်းဆုံးပါ။ရေးပြီးသား ကြာမြင့်နေတဲ့ CV ကိုအမြဲမသုံးသင့်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပညာရေး အလုပ်အတွေ့အကြုံစတာတွေဟာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက်အမြဲ Up To Date ဖြစ်နေတဲ့ CV Formကိုရွေးချယ်ပါ။
Ref – monsterworldwide
Posted by Min Thuta/ Wednesday June 27th, 2018/ Blog/0Comment